1.Kutheni sikhetha imveliso yenkampani yakho?
I-YUFA yakhiwa ngo-1987, ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava. Sinobuchule obukhokelayo be-R & D kwimarike, kunye namaziko ama-R & D amahlanu kunye neziseko ezintathu zemveliso, i-17 ezenzekelayo yokulawulwa kwedijithali yokunyibilikisa iifanitshala, ii-kilns ezi-2 ezijikelezayo, ithonela e-1 yetonela kunye ne-1 yokutshiza ipleyiti, kunye nomthamo wemveliso yeetoni ezingama-250,000.
2.Ungumenzi okanye inkampani yorhwebo?
I-YUFA ngokwenyani ngumvelisi, ayisiyi kuphela ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo, kodwa ikwanokunikezela ngeyona nkonzo iphambili yokuthengisa nasemva kwenkonzo.
3. Luhlobo luni lwemveliso onokuthi uyinike?
Iimveliso zethu eziphambili ziquka ezixineneyo emhlophe alumina fused alumina, alumina oxineneyo fused alumina, enye crystal corundum, alumina-magnesia spinel, α-alumina, alumina granulation umgubo, alumina iiseramikhi kunye iintlobo ezingaphezu kwama-300 kuthotho ezisibhozo.
Kwaye zibonelela ezikumgangatho ophezulu iimveliso alumina uthotho kubathengi phezulu kwiinkalo ezininzi, ezifana abrasives, eliphezulu-lobushushumaterials, iiseramikhi alumina, ukutyabeka anti-umhlwa, iglasi LED, lokufaka zombane, besila ipolishi, kunye nezinto thermal conductive.
4.Ngaba inkampani yakho ingabonelela ngeesampulu okanye ngaba singatyelela umzi-mveliso wakho?
Ewe sinika iisampulu zasimahla, kwaye wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha.
5. Lide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?
Ngokubanzi ziintsuku ezingama-3-5 ukuba iimpahla zisesitokhwe. okanye ziintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 ukuba iimpahla azikho estokhwe, kuxhomekeke kubungakanani.
6. Leliphi ixesha lokuhambisa kwakho?
EXW, FOB Tianjin okanye abanye abathengi 'isicelo